ဖြစ်ရပ်ပံ့ပိုးမှုအထူးကျွမ်းကျင်သူ ၁ ယောဘ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » အဖြစ်အပျက်ပံ့ပိုးမှုအထူးကုငါယောဘသည်
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: Event ပံ့ပိုးမှုအထူးကုငါယောဘသည်
ကုမ္ပဏီ: Mayo Clinic ဆေးခန်း
ဦးစီးဌာန: မီဒီယာပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများ, Event ပံ့ပိုးမှု
တာဝန်များ: ကန့်သတ်အပါအဝင်သော်လည်းမ, Mayo Clinic ဆေးခန်း Multi-မီဒီယာစနစ်များနှင့်ဖောက်သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထောက်ခံမှုပေးသည်: ကိရိယာများဒုက္ခ-ပစ်ခတ်မှု; ပေးပို့နဲ့ setup; အခြေခံပစ္စည်းကိရိယာများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု; Multi-မီဒီယာနည်းပညာကိုပြသမှု; ပေါ်နှင့်ကျောင်းဝင်း Multi-မီဒီယာဖြစ်ရပ်များကိုချွတ်ဘို့ထောက်ခံမှု; အသံနှင့်ဗီဒီယိုစနစ်များ, ပရိသတ်ကိုတုံ့ပြန်မှုစနစ်အားစစ်ဆင်ရေး, စတူဒီယိုနှင့်လူနာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ကြမ်းပြင်ညွှန်ကြားရေးမှူးထောက်ခံမှု, ဗီဒီယိုကွန်ဖရ Direct, နှင့်အခြေခံကဗီဒီယိုကွန်ယက်ကိုနည်းပညာများပါဝင်သည်စေခြင်းငှါတစ်ခုတည်းကင်မရာစစ်ဆင်ရေး။ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု, ဗီဒီယို, ထောက်ခံမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွေ့ဆုံပါဝင်သည်ရသောတာဝန်၏သတ်မှတ်ထားသောဧရိယာများတွင်ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပဖြစ်ရပ်များ, များအတွက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းစီမံခန့်ခွဲ။ troubleshooting များကိုကူညီ-စားပွဲပေါ်မှာနထေိုငျမီဒီယာပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများဖောက်သည်များအဘို့ထောက်ခံမှု, မာစတာထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆင်ရေး, ပယ်-ကျောင်းဝင်း Multi-မီဒီယာဖြစ်ရပ်ထောက်ခံမှုနှင့် Post-ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ (ပြည်တွင်းရေးဘို့ဥပမာအလင်းရောင်, အသံ, အသံဖမ်း, directing, တည်းဖြတ်ရေးနှင့်မီဒီယာပုံတူနိုင်ပါစေ နှင့်ပြင်ပအသုံးပြုမှု; နှင့် On-ခေါ်ဆိုခဗီဒီယို On-demand ထောက်ခံအကြံပြုချက်များအောင်နေဖြင့်အခန်းဒီဇိုင်းနှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူပါဝင်အသုံးအဆောင်များနှင့်အသံဖမ်းပုံစံများအမျိုးအစားအားလုံးကိုထဲမှာစာကျွမ်းကျင်မှုပြ (ဥပမာတိပ်, hard drive ကို, ဝေးလံသောဆာဗာနှင့်။ ။ MSS ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများကညွှန်ကြားထားအဖြစ် webcasts ဖမ်းယူဘူတာ) ။ အခြားအဖြစ်ရပ်ထောက်ခံမှုအသင်းအဖွဲ့ဝင်များမှလေ့ကျင့်ရေးနဲ့ mentorship များကိုနိုင်ပါစေ။ ပမာဏနှင့်မန်နေဂျာတို့ကဆုံးဖြတ်သည်ကဲ့သို့သောအခြားအလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောတာဝန်ဝတ္တရားအတွက်ကူညီနိုင်ပါစေ။ ဒီအနေအထား, Mayo လျှို့ဝှက်ချက်များမူဝါဒလိုက်နာမှုလိုအပ်သည်။ အဆိုပါလက်ရှိလိုအပ်ပါသည် အစောပိုင်းနံနက်, ညနေပိုင်းနှင့်တနင်္ဂနွေအပါအဝင်တိုးချဲ့နာရီအလုပ်လုပ်ရန်။ နာရီအလုပ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ incumben t ကိုခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အရည်အချင်းများ: High School တွင်ဒီပလိုမာ / GED ခုနစ် (7) multi-မီဒီယာသို့မဟုတ်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင် / ရုပ်သံဆွေးနွေးပွဲစက်ရုံအတွင်းနေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း။
အပိုဆောင်းအရည်အချင်းများ: တွဲဘက်ရဲ့မီဒီယာ, စီးပွားရေးဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆက်စပ်လယ်ပြင်၌ဒီဂရီငါး multi-မီဒီယာပံ့ပိုးမှုစက်ရုံအတွင်းနေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်အတွေ့အကြုံ (5) နှစ်, မီဒီယာ, စီးပွားရေးဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆက်စပ်လယ်ကွင်းများနှင့်ပိုမိုနှစ်သက် multi-မီဒီယာပံ့ပိုးမှုစက်ရုံအတွင်းနေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်အတှေ့အကွုံသုံးခု (3) နှစ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဘွဲ့ဘွဲ့။
MAC & PC ကိုကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်း, လုပ်ငန်းလည်ပတ် sysetms နှင့် Microsoft Office ကိုထုတ်ကုန်တွေနဲ့သရုပ်ပြစာကျွမ်းကျင်မှု။
သရုပ်ပြစာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်ခြေရာခံခြင်း, ဒုက္ခလက်မှတ်အစီရင်ခံ, ပရိသတ်ကိုတုံ့ပြန်မှုစနစ်များ, ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကိုထိန်းချုပ်ဆော့ဖျဝဲနှင့်ဝေးလံခေါင်သီ access များအတွက် software နှင့်နည်းပညာများကိုလေ့လာသင်ယူရန်စွမ်းရည်။
လျော်ကြေးအသေးစိတ်: အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုတိုးချဲ့သည့်အခါပညာရေး, အတွေ့အကြုံနှင့်သက်တမ်းပြည်တွင်းရေးရှယ်ယာနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ နိမ့်ဆုံးလစာနှုန်းထားကိုတစ်နာရီလျှင် $ 22.35 ဖြစ်ပါတယ်။
hours / Pay ကိုကာလ: ကွဲပြားခြားနားသည်
အလုပ်ခန့်: Kaela Peterson
အဘယ်ကြောင့် Mayo Clinic ဆေးခန်း? Mayo Clinic ဆေးခန်းပထမဦးဆုံးလူနာများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ထားခြင်းအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုလူနာစောင့်ရှောက်မှုပေးသည်။ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 60,000 န်ထမ်းသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရေး groundbreaking, လူနာစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအတူတကွဖြစ်စေသောထူးခြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးဘက်ပေါင်းစုံမဟုတ်ဘဲ-များအတွက်အကျိုးအမြတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်ကြ၏။ ကျနော်တို့ခြွင်းချက်အကြိုးကြေးဇူးမြားပါဝငျသညျသောအလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်လျော်ကြေးငွေအထုပ်, ပူဇော်. , "သည်အလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ" ထိပ် 100 တစ်ဦးအဖြစ် Fortune မဂ္ဂဇင်းကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ဆိုက်ကိုဖော်ပြချက်: Mayo Clinic ဆေးခန်းမြို့တွင်း Rochester, မင်နီဆိုတာ, 34,000 Mayo အဘိဓါန်န်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများထက်ပိုမိုများအတွက်အလွန်အမင်း livable ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်တက်ကြွ, ဖော်ရွေမြို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါမြို့တသမတ်တည်းသောကွောငျ့လူနေမှုကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျောင်းမှာစနစ်များနှင့်ဘဝ၏အတော်လေးမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကို၎င်း၏တတ်နိုင်ကုန်ကျစရိတ်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နထေိုငျဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရာများကြားတွင်ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Mayo Clinic ဆေးခန်း (မသန်စွမ်းစစ်ပြန်များနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအပါအဝင်) တန်းတူအခွင့်အလမ်းပညာပေးနှင့်အလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ယောဘသည် POST အမျိုးအစား: စာရင်းကိုင်, စီးပွားရေး, ဘဏ္ဍာရေး, စီးပွားရေး Professional က, မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ
ယောဘသည် POST အရေအတွက်: 88960BR
လှံ & Arrows 2018-01-01
ယခင်: PT တိုက်ရိုက်ပွဲထုတ်လုပ်မှုပေး Audio Visual အင်ဂျင်နီယာချုပ် (နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ)